Inkqubo 5 yokuzibophelela:
Ukuvuleleka nangokuzinikela kwishishini
Inkampani yethu 1.Our ikomeleza ngokuzithemba ukwakhiwa kwamatyala okuthenga kunye nokuzibamba, ukuthobela umthetho ngokukhuselekileyo kwamalungelo abathengi kunye nezinto abanomdla kuzo, ikwenza ngokuzinzileyo izibophelelo zabanini beshishini, ibhengeza ngokunyaniseka ukuzibophelela kweshishini ngokunyaniseka, iqinisekisa umgangatho weempahla kunye neenkonzo, kunye nokuzibeka kumgangatho weshishini kunye neenkonzo zokuziphatha;
2.Ukuqinisekisa umgangatho weempahla zeshishini, inkqubo yenkonzo yesandi.Qinisekisa iirekhodi zemveliso kunye nokuhlakulela ukwaziwa kwezentlalo nodumo;
3.Siza kuphumeza ngokungqongqo iinkqubo zokuxela ulwazi kunye neengxelo zonyaka, kwaye siphucule ukulawulwa kwendawo elityala.
4.Ukuqwalaselwa ekwakhiweni kwenkcubeko yokugcina ingqibelelo ukomeleza uluntu kunye nesikhokelo sokukhuselwa kwamalungelo abathengi.
Ukusekwa kwenkqubo yovavanyo lwentlalo novavanyo
1.Yenza inkqubo yokubuya kwabathengi ebuyayo, isebe lenkonzo yabathengi liqhube uphando oluthe kratya lokubuyela kwabathengi, baqokelele izimvo zabathengi kunye neziNgcebiso, kwaye bamisele iifayile zokwoneliseka kwabathengi. Ukuba iingxaki zifunyenwe, zisombulule ngexesha, kwaye wenze ulungiso olukhulu kwintengiso efanelekileyo kunye nabasebenzi benkonzo;
2.Sifanele ukukwamkela ngononophelo ukubeka iliso kuluntu kunye nezimvo zoluntu, simamele ngenkuthalo izimvo kunye neengcebiso zoluntu, kwaye sikwenze ngenkuthalo imisebenzi yovavanyo lwasentlalweni kunye novavanyo.
Seka imveliso kunye nenkonzo yomgangatho wokulandela umkhondo
1.Our Inkampani ithengisa imveliso, isebenzise izinto zokugcina izinto kunye nenkqubo yolawulo lwesoftware ukumanyanisa ulwabiwo, inqanaba lokuhlola umgangatho ngenqanaba lokutshekisha ukuthintela konke kuchaphazela umgangatho wemveliso imeko ezakwenzeka;
2.Inkampani inenkqubo egcweleyo yokuthengisa emva kokuthengisa, esekwe inkqubo iyonke yokusombulula iingxaki zomgangatho wemveliso, kwaye iphumeze indlela yokuphatha kuqala emva koko ithathe uxanduva.Qwalasela ngokungqongqo ukuba onke amasebe abandakanyeka kwinkqubo yolawulo lomgangatho kufuneka enze ifayile. Ukusingatha imeko kunye nohlalutyo lweengxaki kwincwadi ebhaliweyo, kunye nokwahlulahlula uxanduva ngokucacileyo ukuthintela ukuphinda kwakho kwiingxaki ezifanayo.
Ukuseka inkqubo yokuphendula ngoxanduva lokuphendula
Inkampani yethu 1.Our ilawula ngokungqongqo ubulunga benkqubo yokuthengwa kwempahla, kwaye inxibelelanise inkqubo esemgangathweni kunye neemfuno zenkqubo yendalo yenkampani yethu kubaxhasi, kwaye yonyule abathengisi abafanelekileyo ukulawula umgangatho weemveliso ezivela kumthombo.
Inkqubo yokuphendula yokuphendula, ukuseka kwendlela yokubonelela kwabaxhasi, ukuvavanywa kwefektri, uvavanyo lweempahla, ukuvavanywa kwemveliso ukwala izinto ezingafunekiyo.
Seka uxanduva lokuphendula
Inkampani yethu 1.Our ichaza indlela yokuzihlola, isebe ngalinye limisela inkqubo yalo yokubeka esweni, eliziqhuba yona lize liyazihlola neengxaki zalo.
Iqela emva kokuthengisa liza kuhlanganisa kwaye libambe amasebe afanelekileyo ukuba aphendule ngazo naziphi na iingxaki ezinokuvela.